Fowsiyo Yuusuf: Yusur Abrar waxey aheyd qof iska wareersan oo lasoo dirsaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirkii hore ee arrimaha debadda Soomaaliya, Fowsiya Yusuf Xaaji, haatanna ah xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka ayaa beenisay warbixin ay dhawaan soo saartay kooxda kooxda lasocodka cunaqabateynta hubka ee “Monitoring Group”, taasoo sheegeysay in iyada iyo madaxweyne Xasan lunsadeen dhaqaale ay lahaayeen umadda Soomaaliyeed.
Sidoo kale, warbixinta ayaa ku eedeysay Fowsiyo Yuusuf iney isku dayday iney madaxii hore ee Baanka Soomaaliya, Yusur Abrar ku qasabto iney furo koonto lagu xado lacago.
Xildhibaan Fowsiyo waxa ay sheegtay in eedeymaha loo jeediyay eysan ku qotomin xaqiiqda, islamarkaana ay yihiin warar fadhi ku dirirada laga soo uruursaday, iyadoo xustay inay tahay markii 2aad ee iyada laga been abuurto taasoo ay horkacayaan koox ay sheegtay inay ku suganyihiin magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Fowsiyo Yuusuf ayaa xustay in danta laga leeyahay warbixintaan tahay in lagu dhaawaco sharafta iyo magaca dadka wax u qabanaya dalka Soomaaliya.
“Mar weliba waxa ay doonayan inay sharafta uga dhacaan madaxda dowladda Soomaaliya, dadka ama shaqsiyaadka ugu dhaq dhaqaaqa badan” ayay tiri Fowsiyo Yuusuf.
Xildhibaan Fowsiyo ayaa ku eedeysay Yusur Abrar iney tahay qofka dhiibay macluumaadka been abuurka, waxeyna ku tilmaamtay iney aheyd qof iska wareersan sida ay warka u dhigtay.
“Guddoomiyihii hore ee Baanka Dhexe Yusur Abraar oo iyadu mudo 4 maalmood ah xafiiskeeda joogtay ayaa warbixin been abuur ah oo aan cadeymo laheyn gudbisay, qoftaas waxey aheyd qof kii markii horaba meesha la keenay, oo iska qareersan” ayey tiri Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan.
Fowsiyo waxa ay sheegtay ineysan jirin dhaqaalo si gaar ah iyadu meelo gaar ah ugu shubatay oo laga bixiyay qaar kamid ah dalalka Carabta, waxeyna xustay dhaqaalahaas la sheegayo uu R/wasaarihii hore Saacid amray in lagu shubo qasnadda ay maamusho Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya.
Xildhibaan Fowsiyo waxa ay sheegtay in ninka lagu magacaabo Jopra ee warbixintaan been abuurka soo saaray ay maxkamad la kori doonto si looga hortago wararka aan la hubsan ee dhowrka jeer lasoo daaabcay, taasoo ay xustay in dembi uu ka dhalan karo.
Ugu dambeyntii, Fowsiyo Yuusuf ayaa xustay ineysan ku niyad jebi doonin warbixinta ay soo saareen kooxda UN-ka taabacsan ee Monitoring Group.
Technical Committee on Formation of Interim South West State Administration formed